EA067 - Button Panic Call SOS vonjy maika miaraka amin'ny Wifi Camera sy Intercom Function - OMG Solutions
EA067 - bokotra panic Call SOS vonjy maika miaraka amin'ny Wifi Camera sy Intercom Function
* Bokotra finday Smart SOS Call Smart Wireless Battery
* Fampihenana herinaratra ambany, androm-piainana 8-10 Volana (Batterie 2 × 18650)
* HD 720P Video Kalitao, fanaraha-maso ny fahitana amin'ny alina, ny zoro fijerena fakan-tsary dia 166 °
* WDR, HLC, BLC, Compaction Motion, Fandraisana haingana ny Smartphone
* Sensor amin'ny fihetsiketse PIR miaraka amin'ny zoro fanaraha-maso 120 °, fisavana hetsika tsara
* Fanohanana WiFi, serivisy rahona P2P maimaim-poana, alàlan'ny fanairana amin'ny finday amin'ny alàlan'ny APP.
* Tohanana amin'ny alàlan'ny fifandraisana audio 2 aloa, valio ny varavaran'ny toerana misy anao.
1. HD1.0MP sensor sensor CMOS, manohana sary sy horonantsary fandraisam-peo, rakitsoratra tena misy ny zava-drehetra eo anoloanao andro aman'alina.
2. Manohana ny PC / tablet finday iPhone sy Android, rehefa manery azy ny mpitsidika, dia afaka mihetsika video amin'ny fotoana tena izy na miresaka amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao.
3. aorian'ny nahazoanao ny antso avy amin'ny mpitsidika dia afaka hikasika ny bokotra "Mamoha" ianao hanokatra ny varavarana
4. Sensor amin'ny PIR amin'ny vatan'olombelona sy ny fanaraha-maso ny fihetsiketsehana ary fanairana tampoka
5. APP manohana ny finday & finday Android, manohana ny fiasan-droa intercom.
6. Ny vavahadin-tsarimihetsika WiFi dia mifandray amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny tamba-jotra tsy misy tariby na tariby tambajotra.
7. Fanjifana herinaratra ambany
8. Herinaratra: mahazaka ny bateria nefa ny bateria tsy tafiditra
fanapahan-kevitra: 1MP 720P
Lens: 3.6mm (M12) F2.0
endri-javatra: Fampisehoana fanairana fanairana, fampandrenesana fanerena ny tena fampiasa App
IR LED: Eny
telefaonina: Intercom misy làlana roa
Herin'aratra: DC 12V
6586 Total Views 3 Views Today